घट्ना हुनु अघि सोमबार बिहान ९ बजेतिर आएको त्यो फोन…… – Classic Khabar
September 9, 2021 119
घटनाको थप अनुसन्धान गरिँदै, घटनाको थप अनुसन्धान गर्ने प्रदेश नं १ का प्रहरी नायब महानिरीक्षक अरुणकुमार बीसी सा’मूहि’क ह’ ‘त्या भएको घटनास्थलमादी–१ खोलागाउँमा पुग्नुभएको छ । घटना र’हस्य’मयी भएको भन्दै गएपछि प्रहरी नायब महानिरीक्षक बीसी बुधबार साँझ मादी आइपुग्नुभएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सङ्खुवासभाका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक लालध्वज सुवेदीले जानकारी दिए ।
गाउँ शोकमा,परिवारै स’खाप बनाएको घटनापछि मादी–१ उम्लिङ खोलागाउँ शो’कमा डु’बेको छ । अहिलेसम्म अ’पराधी पत्ता नलाग्दा गाउँको अवस्था सामान्य बन्न नसकेको स्थानीयवासी रणबहादुर कार्की बताउनुभयो । घटना कसरी र किन गरिएको हो भन्ने बारेमा केही पनि नखुलेको उनले बताए ।
सोमबार बिहान ९ बजेतिर छिमेकी रामबहादुर खतिवडालाई फोन आयो, ‘कार्की आमै फेरि विरामी भइन्, झारफूक गर्न तुरुन्त जानु पर्‍यो ।’ उनका अनुसार बौद्धमानकी ८४ वर्षीया पत्नी पार्वती कार्की बेलाबेला मुर्छित भइरहन्थिन् । केही वर्षअघि मानिसहरुले मृत्यु भइसकेको भनेर घाट लैजाने पनि तयारी गरेका थिए । तर एकाएक होस आयो । सोमबार पनि बौद्धमान पार्वती फेरि बे’हो’ स् भएको भन्ने बुझे र झरफुक गर्ने रामबहादुरलाई खबर गर्न लगाए ।
तर उनी नपुग्दै खबर आयो, ‘कार्की परिवार त सखाप भइसक्यो ।’ उनले झारफुक गर्ने भनिएकी पार्वतीको सुतकै ठाउँमा हत्या भएको थियो भने अरुका शव अन्यत्र भेटिएको छ । ‘गाउँमा कोहीसँग कार्की परिवारको दुस्मनी पनि थिएन, साह्रै मिलनसार थिए’ रामबहादुर भन्छन्, ‘सबैलाई मा’रेको भनेर लाश देख्दा पनि पत्याउन गाह्रो परिरहेको छ ।’अझै ह’ ‘त्या कसले किन गर्‍यो भन्ने निचोडमा पुगिनसकेको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन्। अनुसन्धान भइराखे पनि निचोडमा पुगिनसकेको प्रदेश नम्बर १ प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता तथा प्रहरी उपरीक्षक नवीन राईले बताए।
‘त्यहाँबाट थप निचोड केही पनि आइसकेको छैन। हाम्रा टोली गएर अनुसन्धान गरिराखेका छन्,’ उनले भने। सुरूमा प्रहरीले आर्थिक कारणले घट्ना भएको हुनसक्ने अनुमान गरेको थियो। कार्की परिवारले झापामा जग्गा किन्न लागेको थाहा पाएपछि प्रहरीले त्यसैअनुसार अनुसन्धान अघि बढायो। जग्गा किन्न लागेको हुँदा घरमा ठूलो रकम हुने र त्यही लु’टपा’ट गर्न ह’ ‘त्या गरिएको हुन सक्ने आशंका थियो।
प्रहरीले तेजबहादुर कार्कीको घरबाट गरगहना तथा नगद सुरक्षित रूपमा फेला पारेको छ। घटनापछि तेजबहादुरका छोरा नरेश दुबईबाट नेपाल फर्किएका छन्। उनी गएराति धरान आइपुगेको मृतकका आफन्त विनोद कार्कीले बताए।
‘हिजो राति दुबईबाट कान्छो दाइ नरेश फर्किनुभएको छ। अहिले धरानमा पोष्टमार्टम कक्षमा हुनुहुन्छ,’ उनले भने,’मलेसियाबाट अर्को दाइ पनि आउने कुरा त छ। तर फ्लाइटको कुरा मिलिरहेको छैन। सायद शनिबारसम्म आउनुहुन्छ।’ विनोदका अनुसार पोष्टमार्टम सकिएपछि बुधबार नै उनीहरूको दाहसंस्कार गर्ने तयारी भइरहेको छ।कार्की परिवारको आर्थिक हैसियत सामान्य थियो। उनीहरू ढुंगामाटोको घरमा बस्थे। जेठा छोरा रमेश अहिले मलेसियामा छन्। उनीहरू डेढ वर्षदेखि विदेशमा थिए।
Prevविदेशबाट छोरा आएपछि गरियो अन्त्येष्टि, नरुने कोहि थिएनन् (भिडियो सहित)
Next६ जनाकै शवको अन्तिम दहासंस्कार गर्ने बेला देखियो यस्तो अनौठो दृश्य, सारा गाउँनै उर्लिएर गरियो सामुहिक अन्तिम संस्कार
मुख्य योजनाकार यिनै हुन् खड्गबहादुर जसले ६ जना को ज्यान लिएर प्रहरी र पत्रकारलाई बेवकुफ बनाउदै थिए !
भागीरथी प्रकरणमा दिनेशले फेरी बयान, मैले आफ्नै दिदीलाई कहाँ त्यस्तो गर्न सक्छु र ?
कतार जान भिषा लागेको थियो, एमाले महाधिवेशनमा चितवन गएका भगलुको मृत्यु, ५ दिन पछि घरमा पुग्यो शव